Yaa kula taliyay Farmaajo inuu diido Bashiir Goobe? | KEYDMEDIA ONLINE
Yaa kula taliyay Farmaajo inuu diido Bashiir Goobe?
Jen Bashiir Goobe ayaa la sheegay inuu ku xiran yahay Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, islamarkaana looga shakiyay inuu wado qorshooyin ka dhan ah Fahad Yaasiin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa wali xiisad ka taagan tahay NISA, oo Farmaajo iyo Rooble ay isku khilaafsan yihiin cidii taliye ka noqon lahayd hay'addan la degay Kiiska Ikraan.
Xaaladdu waxay faraha ka baxday 7-dii bishan, kadib markii kulan gaar ah oo Farmaajo la yeeshay RW Rooble kaasoo ay isku af-garan waayeen magacaabista Jen. Bashiir Goobe.
Warar hoose oo Keydmedia Online heshay ayaa sheegaya in mar kale ay kulmeen labada mas'uul, islamarkaana uu jiray isku soo dhawaansho yar, waxaana lagu balansanaa kulan 3aad.
Kahor inta uusan dhicin kulankii 3aad, waxaa isbedelay Farmaajo oo ka baxay balanta, isagoo sameeyay tallaabo ka careysiisay Rooble oo ah in Yasiin Fareey u magacaabo taliyaha NISA.
Xogta KON waxay sheegaysaa in loo daba-maray Rooble, oo Farmaajo maskaxdiisa ay bedeleen shaqsiyaad ay kamid yihiin Fahad Yaasiin, taliyeyaasha booliska iyo militeriga dowladda.
Farmaajo ayaa laga tusay arinta dhinac kale oo ah in hadii gacantiisa ka baxdo hogaanka NISA laga yeelan doono sidii la rabo iyo inuu Fahad Yasiin xabsi gali doono, maadaama uu ku eedeysan yahay kiiska Ikraan, oo Maxkamad dacwo ka taallo.
Rooble ayaa meeshii uu ka sugay aqbalaad ayaa waxuu kusoo toosay subixii Talaadada iyadoo Farmaajo hogaan cusub u magacaabey NISA, islamarkaana tiisa laga dhigay waxbo kama jiraan.
Waxaa sii kululaaday dagaalka siyaasadeed ee labada xafiis ee ugu sareysa dalka, iyadoo wararka Farmaajo laga joojiyay in lagu baahiyo warbaahinta qaranka iyo baraheeda bulshadda.
Markii uu Rooble isku dayay shalay inuu Bashiir Goobe geeyo xarunta Habar-Khadiija wuxuu la kulmay iska-caabin, iyadoo Ciidankii uu watay ay gudaha gali waayeen, kadib markii is-hortaag ay ku sameeyeen askarta Duufaan, ee lagu soo tababarey Eritrea, oo Fahad adeegsado.
Waxaa xarunta NISA weli gacanta ugu jirtaa Kooxda Farmaajo, iyadoo uu ku sugan yihiin Yaasiin Fareey, ku xigeenkiisa Kulane Jiis iyo xubno kale oo heysta Ciidan xoog leh oo difaacaya.
Xaaladda Maanta way ka duwanayd sidii shalay, oo waxaa jiray deganaansho, waxaana la ogeyn in Wasiirka amniga cusub C/llaahi Maxamed Nuur oo kamid ah xubno mucaaradka ku ah Farmaajo uu Bashiir Goobe geyn doono NISA.
Fahad Yasiin si uusan u noqon xasaanad la'aan, islamarkaana ugu gacan galin hay'adaha amniga, waxaa laga dhigay la-taliyaha amniga qaranka Farmaajo, isagoo lasii dalacsiiyay halkii loo ciqaabi lahaa dembiyadda uu geystay.